Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Boeing ve tsy manan-tsiny sa mbola meloka kokoa amin'ny B737 Max 8
Angamba Ethiopian Airlines nandainga ary noho izany tsy azo atokisana taorian'ny ain'olona an-jatony very. Ireo no teny nataon'ny whistleblower sy mpiasa taloha ho an'ny Ethiopian Airlines izay monina ao Seattle renivohitra Boeing izay mijanona any Etazonia amin'ny fialokalofana. Ny olana dia manankery tsy ho an'i Boeing ihany, fa ho an'ny toekarena amerikanina koa, ary ny fanomezana fialokalofana amin'ny fialokalofana any Etiopia dia matetika fomba sarotra.
Misy ny fiaramanidina etiopiana, fa misy koa ny Lion Air Indoneziana. Ny tatitra iray navoakan'ny Associated Press dia manondro ny antoko meloka eto fa mety tsy ny Boeing ihany fa mainka fa ilay mpitatitra Star Alliance, Ethiopian Airlines.
Ny union Southwest Airlines dia nametraka fitoriana an'i Boeing ny alatsinainy teo tao amin'ny County Dallas, Texas, Fitsaram-paritra. Ny Fikambanan'ny mpanamory fiaramanidina Southwest Airlines, na SWAPA, dia nilaza fa ny mpikambana ao aminy dia nanao sonia tamin'ny fanidinana ireo fiaramanidina vaovao satria ny Boeing Co. dia nilaza tamin'izy ireo fa mendri-pitokisana izy ireo ary "mitovy amin'ny fiaramanidina 737 efa nandramana ny fotoana izay nanidinan'ny mpanamory azy nandritra ny taona maro." "Diso ireo fanehoana ireo," hoy ny firaisana. Vokatry ny fizotry ny tany, Southwest - ny mpanjifa lehibe indrindra ho an'ny andiany 737 Max - dia tsy maintsy nanafoana sidina mihoatra ny 30,000, nandany vola mihoatra ny $ 100 tapitrisa ho an'ny mpanamory azy, hoy ny fitoriana.
Iray amin'ireo zotram-piaramanidina mitombo haingana indrindra atsy Afrika ny Ethiopian Airlines ary betsaka ny zavatra tokony ho very. Ny zotram-piaramanidina dia miasa iray amin'ireo ivom-panofanana mandroso indrindra ho an'ny mpanamory fiaramanidina ary hita ho maodely ho an'ny fiarovana sy fiofanana.
Mety ho mahery fo ilay whistleblower etiopiana, nefa manana zavatra be azo koa izy, fialokalofana any Etazonia. Ny ady hevitra hafa dia: Ho an'i Yeshanew, 39 taona, ny fanapaha-kevitra ho tonga whistleblower dia nitondra vidiny lafo. Namela havana sy asa ao amin'ny Ethiopian Airlines izay nantsoiny hoe “nofinofiko teo amin'ny fiainako” izy, manana voninahitra sy karama lehibe ahafahany mividy trano misy rihana telo. Tsy azony antoka ny karazana asa mety ho azony any Etazonia, na raha homena fialokalofana izy.
Nofintininy ny antony tao aoriany nitenenany hoe: "Tsy maintsy ambarako amin'izao tontolo izao ny marina, ny zava-misy mba hamboarina ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka," hoy izy, "satria tsy afaka mitohy toa izao izay ataony izao."
Ity ny tohin'ny tantara navoakan'ny AP androany:
Ny lohan'ny injenieran'ny Ethiopian Airlines teo aloha dia nilaza tamin'ny fitarainan'ny mpitsikilo izay napetraky ny mpanara-maso fa niditra tao amin'ny firaketana momba ny fikojakojana ny fiaramanidina Boeing 737 Max iray andro taorian'ny nianjerany tamin'ity taona ity, ny fivakisan'ny fifanolanana izay noresahiny dia anisan'ny lamin'ny kolikoly izay nahitana ny fanamboarana azy. antontan-taratasy, sonia amin'ny fanamboarana manjavozavo ary koa kapohina ireo izay tsy afaka intsony.
Yonas Yeshanew, izay nametra-pialana tamin'ity fahavaratra ity ary mitady fialokalofana any Etazonia, dia nilaza fa na dia tsy mazava aza hoe, na inona na inona, ao amin'ny firaketana dia novaina, ny fanapahan-kevitra hiditra amin'izy ireo mihitsy rehefa tokony hofehezina izy ireo dia taratry ny governemanta iray- kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tsy misy fetra sy takona afenina
"Hiharihary ny zava-misy mahatsiravina… Ny Ethiopian Airlines dia manenjika ny vina fanitarana, fitomboana ary fahazoana tombony amin'ny fampandeferana ny fiarovana," hoy i Yeshanew tamin'ny tatitra nataony, izay nomeny ny The Associated Press taorian'ny nandefasany azy tamin'ny volana lasa teo tany amin'ny US Federal Aviation Sampana fitantanana sy maso ivoho iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny rivotra.
Ny tsikera nataon'i Yeshanew momba ny fomba fikojakojana ny etiopiana, notohanan'ny mpiasa telo hafa efa niresaka tamin'ny AP, no nahatonga azy ho feo farany manentana ny mpanao famotorana mba hijery akaiky ny mety ho fitrangan'olombelona ao amin'ny saga Max fa tsy hifantoka fotsiny amin'ny rafitr'i Boeing manohitra ny fivarotana. izay nomelohina nandritra ny lozam-pifamoivoizana roa tao anatin'ny efa-bolana.
Tsy kisendrasendra, hoy izy, ny fahitan'ny Etiopiana ny iray amin'ireo fiaramanidina Max nidina rehefa tsy nahita loza toy izany ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka maro hafa izay nitondra ny fiaramanidina.
Ny Ethiopian Airlines dia naneho an'i Yeshanew ho mpiasa taloha tsy afa-po ary nandà tamim-pahatokisana ny fiampangana azy, izay manome endrika tsy fahitan-tsofina ny fahitana ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ho iray amin'ireo orinasa mahomby indrindra atsy Afrika ary loharanom-pireharehana nasionaly
Nilaza i Yeshanew tamin'ny tatitra nataony sy ny resadresaka nifanaovany tamin'ny AP fa mitombo haingana loatra ny Etiopiana ary miady mafy hitazona ny fiaramanidina amin'izao fotoana izao satria mitondra mpandeha 11 tapitrisa isan-taona, inefatra izay nohazakainy am-polony taona lasa izay, anisan'izany ny sidina mankany Los Angeles, Chicago, Washington ary Newark, New Jersey. Nilaza izy fa miasa mafy ny mekanika ary noterena haka hitsin-dàlana mba hodiovina amin'ny fiaramanidina, ary ny mpanamory fiaramanidina kosa miala sasatra kely ary tsy ampy fampiofanana.
Ary namoaka fanaraha-maso FAA izy, telo taona lasa izay, izay hita, ankoatry ny olana am-polony maro hafa, fa saika ny mekanika 82, ny inspektera ary ny mpanara-maso rehetra izay nojerena ny fisian'izy ireo dia tsy nanana ny fepetra farany ilaina amin'ny fanaovana ny asany.
Nahitana mailaka i Yeshanew izay nanentana ny tompon'andraikitra ambony nandritra ny taona maro mba hampitsahatra ny fanao amin'ny zotram-pisoratana anarana amin'ny asa fikojakojana sy fanamboarana izay nambarany fa tsy tanteraka, tsy marina na tsia mihitsy. Nilaza izy fa nanatsara ny ezaka nataony taorian'ny fianjerana tamin'ny 29 Oktobra 2018, nianjera tamin'ny Lion Air Boeing 737 Max tany Indonezia ka nahafaty olona 189 tao anaty sambo. Ny mailaka iray nalefan'i Yeshanew nalefa tany amin'ny CEO Tewolde Gebremariam dia nanentana azy mba “hiditra an-tsehatra manokana” hampijanona ireo mekanika tsy hamitaka firaketana.
Tsy niraharaha ireo fitalahoana ireo, hoy izy. Ary taorinan'ny 10 martsa 2019, fianjerana an-tendron'ny Boeing 737 Max avy any Etiopia tany ivelan'i Addis Ababa izay namono ny olona 157 tao anaty sambo rehetra, nilaza i Yeshanew fa mazava fa tsy niova ny fomba fisainana.
Nilaza i Yeshanew tamin'ny resadresaka nifanaovana taminy fa ny ampitson'ny nitrangan'ny fianjerana, ny Lehiben'ny Mpikirakira ny Etiopiana Mesfin Tasew dia naneho ampahibemaso fa mety omena tsiny ny zotram-piaramanidina noho ny "olana" sy ny "fanitsakitsahana azy", ary nandidy izy fa ny firaketana ao anaty fiaramanidina Max nidina nanamarina ny “lesoka”.
"Mivavaka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanondro izany ny hadisoanay," hoy i Yeshanew nanonona ny COO.
Tamin'io andro io ihany, hoy i Yeshanew tao amin'ny tatitra nataony, nisy olona niditra an-tsokosoko tamin'ny rafitra fitehirizana firaketana amin'ny alàlan'ny solosaina, indrindra ireo rakitsoratra avy amin'ny fiaramanidina midina izay namaritra ny olana momba ny fifehezana sidina - "horonan-taratasy iray ankavanana" - fa nitatitra telo ny mpanamory fiaramanidina volana talohan'izay. Yeshanew dia nampiditra tao amin'ny tatitra nataony ny pikantsary ny lahatahiry ireo rakitsoratra mifandraika amin'ilay olana izay mampiseho fidirana farany izay nasiana tombo-kase tamin'ny 11 martsa.
Nilaza i Yeshanew fa tsy fantany izay tao anaty rakitsoratra teo aloha na raha ovaina izy ireo, sisa no navela hiteny fa vita ny fitsapana ary voavaha ny olana. Na dia nisalasala aza izy fa ny olan'ny fifehezana sidina dia nampidina ny fiaramanidina dia nilaza izy fa ny fanovana ny firaketana dia hiahiahy ny tena toetran'ny fiaramanidina tamin'ny fotoana nitrangan'ny fianjerana ary koa ny fahamendrehan'ny zotram-piaramanidina iray manontolo.
Nilaza ny manam-pahaizana momba ny fiaramanidina fa aorian'ny fianjerana, ny firaketana fikojakojana - indrindra ny bokin-kazo sy ny kaonty misy ny fanamarihan'ny mpanamory fiaramanidina sy ny fanamboaran'ireo mekanika - dia takian'ireo mpanera iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny rivotra mba hamehezana avy hatrany, ary ny fikasana hanodikodina azy ireo dia fanitsakitsahana lehibe izany. hanitsakitsahana toerana misy heloka bevava.
"Raha misy fiampangana anao niditra an-tsoratra, midika izany fa manafina zavatra ianao, manana zavatra hafenina ianao," hoy i John Goglia, mpikambana teo aloha tao amin'ny US National Security Board Board ary manam-pahaizana momba ny fikojakojana ny fiaramanidina.
Ho valin'ny AP, Etiopiana dia nandà ny tantaran'ny fanitsakitsahana sy fikolokoloana tsy mendrika ary nandà ny COO na nisy olona hafa nandidy olona hanova ny firaketana momba ny fikolokoloana tamin'ny 737 Max nilatsaka. Nilaza izy fa raha vao niseho ny loza, dia voaisy tombo-kase ireo antontan-taratasy ireo, notehirizina tamina toerana azo antoka ary natolotra ny birao famotopotorana momba ny lozam-piaramanidina ao Etiopia. Nanampy izy io fa na dia "teknisianina niezaka nijery ny firaketana ny fiaramanidina aza dia hita fa tsy nisy data niova na nohavaozina.
I Etiopiana no kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra any Afrika, ahazoam-bola ary iray amin'ireo vitsy monja amin'ny kaontinanta nahavita ny fitsapana ilaina hamelana ny fiaramanidiny hiditra any Eropa sy Amerika Avaratra, miaraka amin'ny rakitsoratra azo antoka.
Nohamafisin'ny orinasa fa talen'ny injenieran'ny fiaramanidina sy ny drafitra i Yeshanew saingy nilaza izy fa nidina noho ny "fahalemena lehibe eo amin'ny fitarihana, fifehezana ary tsy fahatokisana."
"Mpiasa taloha tsy afa-po izy izay namorona tantara tsy marina momba ny Ethiopian Airlines, ampahany mba hamaly faty noho ny fihenan-tenany nandritra ny fotoana niasany tany Etiopia, ary ny sasany mety hamorona tranga iray hialokalofana any Etazonia," hoy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tamin'ny mailaka iray AP. "Tianay ny hamafisina indray mandeha fa diso sy tsy mitombina daholo ny fiampangana azy."
Yeshanew sy ny mpisolovava azy, Darryl Levitt, dia nilaza fa tsy nidina tany an-trano mihitsy izy ary, raha ny marina, ny fiakarany hatrany amin'ny laharana nandritry ny 12 taona niasa tamina Etiopiana dia nitohy hatramin'ny amin'ity taona ity aza rehefa namboarina izy hanara-maso ny asa vaovao fanaovana faritra fiaramanidina. ary manadihady mpanamory fiaramanidina roa izay tonga tany Oganda ary saika hidina amin'ny farihin'i Victoria. Nilaza i Yeshanew ny tolo-kevitr'izy ireo taorian'io tranga io - mpanamory fiaramanidina tsy ampy traikefa kokoa amin'ny fiandrasana akoho sy fiofanana tsara kokoa - no tsy niraharaha.
Nametaka mailaka anatiny ihany koa i Yeshanew tamin'ny tatitra izay asehony fa tsy fahitana taratasy sy fanamboarana diso, ary ny fanadihadiana avy amin'ireo mpamatsy ampahany izay manondro hadisoana mitovy amin'izany, ao anatin'izany ireo izay nitarina teo am-baravarankely roa ho enti-manidina, nanaparitaka ny fomba fanamontsanana, ary tsy hita na bolts diso amin'ny sensor lehibe.
"Hitako manokana fa maro ny kara-pifandraisana vita sonia nefa tsy manao izay voasoratra ao amin'ny torolàlana," hoy i Yeshanew nanoratra tany amin'ny COO Tasew tamin'ny taona 2017. "Mety hiteraka olana ara-piarovana lehibe mihitsy aza izany fandikan-dalàna izany."
Ny sasany kosa nanao fanambarana mitovy amin'izany. Tamin'ny 2015, mpiasa iray tsy fantatra anarana no nilaza tamin'ny laharam-pahamehana fiarovana FAA fa ny mekanika matetika dia manadio ireo fiaramanidina hivoaka amin'ny olana ara-mekanika "tsy voavaha". Tsy nazava raha toa ka nahatonga ny hetsika nataon'ny FAA na ny kaompaniam-pitaterana ny fitoriana.
Mpiasa etiopiana taloha telo hafa no nanao fiampangana toy izany tamin'ny AP, anisan'izany ny iray izay nanome antonta-taratasy izay nolazainy fa tsy nety ny fanamboarana sy ny lesoka tamin'ny taratasy efa an-taonany maro, ary ny iray hafa izay nilaza fa ny mekanika dia nahatsapa fa tsy manan-tsafidy afa-tsy ny «fikapohana pensilihazo». sonia amin'ny fanamboarana mbola tsy vita.
"Tena mandainga momba an'io izy ireo," hoy i Franz Rasmussen, izay nanidina ho an'ny kaompaniam-piaramanidina nandritra ny roa taona talohan'ny nialany tamin'ny 2016. "Nisy filozofia: Tsy afaka miondrana fiaramanidina ianao - mandeha, mandehana, mandehana."
Anisan'ireo fiampangana ao amin'ny tatitra nataon'i Yeshanew ny fananan'ny Etiopiana toby fiambenana toy ny fonja noho ny foiben'ny foiben-toerany Addis Ababa izay nampiasainy tamin'ny famotorana, fampitahorana ary indraindray fikapohana ireo mpiasa izay tsy nahay nilahatra. Nilaza i Yeshanew fa fantany ny mekanika roa farafaharatsiny nokapohina tao anatin'ny telo taona lasa taorian'ny tsy fankasitrahan'ny orinasa azy, ary natahotra izy fa io no miandry azy ihany.
Nilaza i Yeshanew tao anatin'ilay tatitra ary avy eo ny resadresaka nifanaovana tamina AP dia nentina tany amin'ny foibe fitehirizan-tany maloto izy tamin'ny volana Jolay noho ny fiahiahiany fa niresaka tamin'ny fikambanana vaovao izy, ary rehefa vita ny adiny 10 dia nolazaina fa halefa any am-ponja izy “Toy ny olona rehetra teo alohany” raha tsy nangina izy. Noraisiny ho fampitahorana fampijaliana izany.
"Raha any am-ponja ianao, midika izany fa daroka ianao, hampijaliana," hoy izy tamin'ny AP. “Tsy misy fahasamihafana eo amin'ny rafitra politika ankehitriny any Etiopia.”
Efatra andro taty aoriana, nitsoaka nankany Etazonia niaraka tamin'ny vady aman-janaka roa i Yeshanew ary nipetraka tany amin'ny faritr'i Seattle.
Ny mpitondra tenin'ny sendikan'ny seranam-piaramanidina, Bekele Dumecha, dia nilaza tamin'ny AP fa nihaona amina mpiasa am-polony mahery izy nandritra ny enin-taona izay nokapohina tao amin'io fonja io ihany, anisan'izany ny iray tamin'ireo voarohirohy ho voatonona fa hitan'i Yeshanew. Nilaza i Dumecha fa nahita an'io olona io adiny iray taorian'ny famotsorana azy, mangana ary manafintohina.
“Tsy afaka nandeha tsara izy”, hoy i Dumecha, izay mipetraka ao Minnesota ankehitriny ary mitady fialokalofana ihany koa. “Potika ara-tsaina sy ara-batana izy.”
Nilaza ny Human Rights Watch tamin'ny tatitra tamin'ny volana aprily fa ny fampijaliana any amin'ny fonja sy ny "foibe fitanana tsy marobe" dia efa "olana lehibe sy tsy voalaza" tany Etiopia, ary ny mpikaroka teo aloha tao dia nilaza fa nanadinadinina mpiasa mpiasa fiaramanidina telo izay nilaza fa nampijalian'ny governemanta, ny telo taona lasa izay.
"Izany rehetra izany dia ny fiantohana ny endrika tsara misy eo amin'ny orinasa ary ny firenena tsy miovaova", hoy ny mpikaroka HRW, Felix Horne. “Betsaka ny olona nanandrana niteny tamin'ny fanoherana ireo orinasa fehezin'ny governemanta no natsipy am-ponja sy nokapohina mafy.”
Tao anatin'ny fanambarana nataony, nolavin'ny Ethiopian Airlines fa misy ivon-toerana fampijaliana noho ny fampijaliana ary nanolotra azy ireo haneho reporter AP manodidina ny tokontany. Saingy taorian'ny nangatahan'ny AP fitsidihana toy izany tamin'ny herinandro lasa teo, nilaza ny tompon'andraikitra etiopiana fa maharitra herinandro maromaro vao handamina izany.
Ny fiampangana an'i Yeshanew no farany manome hazavana ny anton-javatra hafa ankoatry ny nanjary fifantohana mahery vaika tamin'ny fanadihadian'ny fianjerana Max - rafitra iray ao amin'ny fiaramanidina antsoina hoe MCAS, ho an'ny Maneuvering Characteristics Augmentation System, izay manosika ho azy ny orona ny fiaramanidina rehefa eo izy mety hikatso.
Ny tatitra mialoha dia nanondro fa tsy nahomby tamin'ny fianjerana nahafaty olona roa, niaraka tamin'ny mpanamory tsy voafehin'ny fiaramanidina rehefa niady tamin'io. Ny mpandamina dia nametraka fiaramanidina 400 737 Max raha mbola manandrana manamboatra ny olana i Boeing.
Mpilaza vaovao iray hafa avy any Etiopiana, mpanamory fiaramanidina antitra Bernd Kai von Hoesslin, no nilaza tamin'ny AP tamin'ny volana Mey fa taorian'ny fianjerana Lion Air tany Indonezia dia niangavy tamin'ny tompon'andraikitra ambony etiopiana izy mba hanome fiofanana tsara kokoa ny mpanamory momba an'i Max, naminavina fa raha tsy voavolavolan'ireo mpanamory fiaramanidina ireo protokolon'i Boeing ireo. ho an'ny fomba fampandehanana ny rafitra autopilot raha sendra misy hain-trano, "ho fianjerana azo antoka izany."
Nilaza ny Etiopiana fa manaraka ny dingana rehetra napetrak'i Boeing ireo mpanamory. Saingy ny tatitra mialoha ny lozam-pifamoivoizana dia nampiseho fa nivily lalana izy ireo ary nanao hadisoana hafa, indrindra ny nanidina ny fiaramanidina tamin'ny hafainganam-pandeha tsy dia mahazatra loatra ary namerina namerina ny rafitra anti-stall taorinan'ny nanodihany azy io tamim-pahefana. Enina minitra taorian'ny sidina Max, ny fiaramanidina misy mpandeha avy amin'ny firenena efa ho folo dia nianjera tamin'ny tany tokony ho 40 kilaometatra avy teo amin'ny seranam-piaramanidina.
Androany maraina hoy ny Ethiopian Airlines dia nivadika ho Airbus taorian'ny lozam-pifamoivoizana B737 Max.